Septor a distro ku saleysan Debian diiradda on asturnaanta | Laga soo bilaabo Linux
Septor qarsoodi ah oo diirada saareysa Debian
Markii aan ka hadlayno nidaamyada diiradda saara arrimaha gaarka ah dhab ahaantii in yar ayaa ka jirta Linux Marka laga hadlayo fikirka labaad, badankood waxay u qaataan Debian salka, ma wax iska yimid baa?, In kasta oo laga eego aragtida dhabta ah Debian waxay isu taagtay inay tahay mid ka mid ah qaybinta ugu adag oo waxay leedahay tiro badan oo codsiyo ah.
In kasta oo laga eego aragtida shaqsiyadeed ee tan awgeed waxaan doorbidi lahaa Fedora ama Arch Linux, laakiin taasi waa wax kale. Markan waxaan ka hadlaynaa qaybinta Linux oo ku wajahan asturnaanta.
1 Ku saabsan Septor Linux
2 Soodejiso Septor Linux
Ku saabsan Septor Linux
Kala-baxa waa qeybinta Linux oo siisa isticmaaleyaasha jawi xisaabeed horay loo habeeyay si ay internetka uga baaraan iyagoo aan lagaran.
Waxay ku saleysan tahay laanta "Tijaabinta" Debian waxayna isticmaashaa Privoxy, wakiil si loo wanaajiyo asturnaanta, oo ay weheliso shabakada qarsoodiga ah ee loo yaqaan 'Tor anonymity network' si wax looga beddelo xogta bogga iyo cinwaanada HTTP ka hor inta uusan boggu ka baaraandegin barowsarku.
Qeybinta Qaybta wuxuu u adeegsadaa KDE Plasma inuu yahay jawiga desktop ee la door bidayo sidoo kale waxaa ka mid ah launcher si uu u soo dejiyo biraawsarkii ugu dambeeyay ee Tor iyo sidoo kale OnionShare wadaagista feyl la'aanta iyo Ricochet ee fariimaha degdega ah ee qarsoodiga ah.
Xaaladdan oo kale Debian (Buster) wuxuu ahaa kii loo adeegsaday inuu aasaas u noqdo nidaamka qalliinka ee noocyadiisa wali socda, oo leh jawi sawir leh oo KDE ah.
Qaybinta waxaa loo isticmaali karaa iyada oo loo marayo habka tooska ah, iyadoo la adeegsanayo usha USB-ga ama waxaa si heer sare ah loogu rakibi karaa disk adag.
Aad bay u adkaan lahayd in la iibsado Septor leh Dabo, Kodachi Linux ama qaybinta kale oo leh qaab isku mid ah. Maaddaama mid kasta oo ka mid ahi ku biirinayo fikirkiisa.
Xirmooyinka Top Linux
Xilligan Nidaamku wuxuu ka kooban yahay xirmooyinka ka kooban Debian Buster iyo wadnaha nidaamka waxaan ka heli doonnaa Linux Kernel 4.19 iyo waliba jawiga desktop-ka ee KDE Plasma qaabkiisa 5.14.3.
Marka loo eego hawsha mashruuca, barnaamijyada horay loogu rakibay, codsiyada loo tixgeliyey inay ku habboon yihiin qaybinta noocaan ayaa la xushay. Dhowr barnaamij ayaa helay bedel, markaa hadda liiska buuxa ee barnaamijyadu waxay u egyihiin sidan:
Dolphin iyo KFind si loo maareeyo loona raadiyo faylasha.
Synaptic iyo Gdebi si loo maareeyo loona rakibo softiweerka.
Sawirro / Multimedia: GIMP, Gwenview. VLC, K3b, Guvcview
Xafiiska: LibreOffice, Kontact, KOrganizer, Okular, Kwrite, Kate
Internetka: Tor Viewer, Thunderbird, Ricochet IM, HexChat, QuiteRSS, OnionShare
Qalabka: Gufw, Konsole, Ark, Sweeper, KGpg, Cleopatra, MAT, KWallet, VeraCrypt, Bootis
Helitaanka feylasha galka xididka, waxaa jira astaan ​​laga heli karo meenuga. Bilowgii ugu horreeyay, macmiilka fariinta degdega ah ee Ricochet wuxuu weydiin doonaa haddii adeegsadaha uu doonayo inuu ku xirmo shabakadda Tor.
HexChat iyo QuiteRSS waxaa loo qaabeeyey si iska caadi ah shabakadda Tor, adeegsadayaashuna waxay wax ka beddeli karaan tan iyagoo ku hagaajinaya barnaamijyadan Shabakadda.
download Linux Septor
Ugu dambeyntii, haddii aadan weli haysan Linux Septor lagu rakibay kombuyuutarkaaga oo aad rabto inaad soo dejiso oo aad rakibto qaybintaan Linux ee diiradda saareysa asturnaanta isticmaale ee kombiyuutarkaaga ama aad rabto inaad ku tijaabiso mashiin farsamo.
Kaliya waa inaad tagtaa bogga rasmiga ah ee qaybinta iyo qaybta soo degsashada waxaad ka heli kartaa sawirka nidaamka. Xiriiriyaha waa kan.
Sawirka la soo dejiyey waxaa lagu duubi karaa qalab USB ah iyadoo la adeegsanayo codsiga Etcher.
Septor Linux waxaa hadda loo qaybiyaa sidii hal sawir Live DVD ISO ah Waxay ka kooban tahay baakado la qurxiyay oo kaliya 64-bit naqshadaha dhismaha (x86_64) waxaana lagu gubi karaa 2GB ama USB flash drive weyn iyo sidoo kale DVD.
Haddii aad ku cusub tahay Linux laguna dhiirrigeliyo inaad marto nidaamka rakibidda, waxaan kuu sheegi karaa inay tani fududahay oo ay qaadanayso 10 daqiiqo.
Iskuxirka garaafka ee habka rakibaadda ayaa u diidaya Ingiriisiga, kaas oo horeyba loo beddeli karaa tallaabada ugu horreysa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Septor qarsoodi ah oo diirada saareysa Debian
Purism wuxuu ku dhawaaqayaa processor-ka iyo GPU cusbooneysiinta buugaagta xusuus-qorka